Ciidamada Naafada Xoogga Dalka oo Dibadbax ka dhigay Muqdisho |
Ciidamada Naafada Xoogga Dalka oo Dibadbax ka dhigay Muqdisho
Ciidamada naafada xoogga dalka iyo saraakiishii hore laga eryay shaqada ciidanka ayaa maanta dibadbax ka dhigay Muqdisho, iyagoo sheegay inay ka cabanayaan inaysan xuquuqdooda ka helin dowladda.
Qaar ka mid ah ciidamadan dibadbaxa dhigayay ayaa ku dhawaaqayay erayo ay kaga soo horjeedaan taliyaha ciidamada xoogga dalka, kaasoo ay ku eedeeyeen inuu diiday in xuquuqdooda ay helaan.
Didbadbaxan oo ka dhacay isgoyska Sayidka oo ku dhow xarunta baarlamaanka Somalia ayaa sheegay inay madaxda ugu sarreysa dalka ku wargelinayaan in taliyaha ciidamada xoogga uu u diiday xuquuqaadkoodii.
“Taliska ciidamadu wuxuu noo diiday xuquuqdeen, wuxuuna nagu yiri xuquuq kuma lidiin ciidamada. Innagu waxaan nahay ciidamadii dalka u naafoobay aad ayaana uga xunnahay in maanta naloo diido xuquuqdeena, dalkeenna aan ka noqon marti,” ayuu yiri afhayeenka ciidamada naafada xoogga dalka Cabadi-Mahad oo warbaahinta la hadlay.
Intaas kaddib ayaa waxaa dibadbaxayaasha kala eryay ciidammo ka tirsan kuwa xoogga dalka, kuwaasoo sheegay inaan dibadbax la dhigi karin, iyagoo amar ku siiyay warbaahinta inay goobtaas ka tagaan.
Dhinaca kale, xildhibaanno ka tirsan guddiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay ciidamada dibadbaxa dhigayay, iyagoo ka dhageysatay cabashooyinkooda, waxaana guddigu ay u sheegeen in arrintan wax laga qaban doono.
Xusbnaha guddiga difaaca baarlamaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay u yeerayaan wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka ayna wax ka weydiin doonaan cabashada ciidamada naafada xoogga ee maanta dibadbaxa cabashada ah dhigay.
Guddoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka, xildhibaan Xuseen Carab Ciise ayaa sheegay in arintan ay tahay mid laga xumaado ayna wax ka weydiinayaan saraakiisha ciidanka ee arrintan ku shaqada leh iyo wasaaradda gaashaandhigga.
– See more at: http://hiiraan.com/news/2014/May/wararka_maanta10-46511.htm#sthash.24HHszx2.dpuf Cialis Black for sale, buy lioresal.